Kedu ihe na-adịghị ike na-emefu ego? | Martech Zone
Kedu ihe na-adịghị ike na-emefu ego?
Enweghị m ike ịgwa gị oge ole m gara oku na nnọkọ ọgbakọ bụ oge zuru ezu. Ma ọ bụ glitchy software, adịghị njikere ugbu a, ma ọ bụ ọdịyo ọdachi, ọ na-ala n'iyi a otutu oge na ego. Ma ọ naghị enyere aka mgbe ọ dị m ka nke a mee karịa 30 pasent nke oge.
Nzukọ ọ bụla - n'ịntanetị ma ọ bụ n'ime mmadụ-bụ itinye ego nke ụlọ ọrụ gị na-etinye oge, ego na akụrụngwa. Ma ego ahụ ọ ga-abụ nke dị mma — mgbe ọnụ ahịa ya karịrị ihe ọ ga-efu — na-adabere n'ihe ga-esi ná nzukọ ahụ pụta.
Know maara na obere azụmaahịa na-emefu ego Ijeri $ 37 kwa afọ na nzukọ na-enweghị isi? Chee echiche banyere nke ahụ maka nkeji. Oge ọ bụla ị na-anọdụ na nzukọ na-adịghị arụpụta ihe, ụlọ ọrụ gị na-efufu ego. M ga-anwa anwa kweta na ọtụtụ n'ime nzukọ ndị ị na-aga dị ka ndị na-adịghị arụpụta ihe. Dịka onye nwe azụmaahịa, nke a na-eme m ụjọ.
Ego ole ejiri nọrọ na nzukọ anaghị arụpụta afọ ọ bụla, ọ dị ịtụnanya na mmadụ ole na ole n’ezie na-achọ idozi nsogbu a Have nwere ụkpụrụ nduzi maka otu esi eduzi nzukọ? Nzukọ ọ bụla nwere nzube? Ndị mmadụ ha na-ekenye ndị ọzọ ma na-esochi ha ma a gbasasịa? Ọ bụrụ na ị zara “mba” n’ajụjụ ndị a, mgbe ahụ ọ bụ oge ịtụle otú e si eduzi nzukọ a na-azụ ahịa gị.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ amaghị ego ole ha na-emefu na nzukọ na-adịghị arụpụta afọ ọ bụla. Anyị na ndị ọrụ rụkọrọ ọrụ teknụzụ na-emekọ ihe ọnụ onye nkwado ReadyTalk iji mepụta mgbako mmekọrịta ga - egosi gị ego ole ị na - emefu yana ihe ọgbakọ na - adịghị ike na - efu gị. Maka ọbụna ihe ọma ndị ọzọ, lelee nke ha ọba akwụkwọ ọgụgụ dị ịtụnanya.
Nwalee ReadyTalk's Adịghị Ike Conferencing mgbako na ịpị njikọ dị n'okpuru ebe a, ma malite idozi nzukọ gị ugbu a!
Jiri Adịghị Ike ogbako Mgbako
Ngosipụta: ReadyTalk bụ onye ahịa nke DK New Media!
Tags: ogbako onumgbakoogbako okuogbako ahianjikerenzukọ ọgbakọ vidioikpo okwu webinar
Ngwa ngwa ọdịnala: Ihe kpatara eji ewu, ihe iwu, otu esi akwalite ya